Wararka - Hanukeii
Moodo iyo Qaab nololeed Blog
Dhamaan Qeybaha Wararka Entretenimiento Gente nololeedka Recipes Aqoonta iyo Aqoonta Isbeddellada Safarka iyo Goobaha
Alexandra Pereira: Saamayn, mood iyo dhiirigelin.
En Hanukeii waxaan jecel nahay inaan la wadaagno tixraacyada adduunka moodada, shabakadaha iyo qaab nololeedka. Taasi waa sababta munaasabaddan, waxaan rabnaa inaan kuu sheegno wax walba, laakiin xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Hispaniola Alexandra Pereira. Hormuudka bloggers -ka Yurub, taariikhdeeda iyo gaaritaankeeda tan iyo markii ay soo gashay dunida dhijitaalka ah. Sidoo kale ma jeclaan lahayd inaad ogaato qaabkiisa gafas de sol jecel? Hubaal waxaad hore u malaynaysaa.
Haddii aad tahay xayawaan jecel oo weliba aad ku kala garanayso dhinacyo badan, aan kuu sheegno in midkeen kastaaba leeyahay ruux xayawaan. Haddii aadan garanayn waxaan ka hadlayno oo aad jeclaan lahayd inaad ogaato xayawaanka ay shakhsiyaddaadu sida ugu badan u aqoonsato, waxaan kuu keenay kediskan halka xayawaanka ka sokow, hubaal waad isku aqoonsan doontaa koofiyadaha!
Sida loogu faafiyo TikTok oo aan loogu dhicin isku dayga.
Waxaad ku dhaadhacdaa waddada waxaadna arkeysaa niman ku hor cayaaraya moobilka, mise waad sameyneysaa laab barta Instagram -ka iyo meel ka baxsan a tartan, kaas oo kumanaan qof ay sameynayaan. Ma ogtahay waxaan ka hadlayno? Xaqiiqdii dhammaan waxa ku jira ayaa ka yimid TikTok iyo haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato App -kan oo aad noqoto viral, waxaan kuu soo qaadanaynaa xeelado kaa caawin kara inaad la dagaallanto algorithm -ka. Diyaar ma u tahay?
Xeebta Venice, CA: Ku dhawaaqida dhaqanka, farshaxanka iyo nolosha.
Waxaa jira goobo, daqiiqado, dadka iyo dabcan ... Koofiyadaha! Taasi waxay ku hayaan xusuusteenna. Haa! Markan waxaan kuu soo qaadannay hage leh shan shay oo ay tahay inaad aragto markaad aad u soo booqato xeebta hindise, oo leh qaab iyo jawi ka sii badan: Venedik Beach. Soo ogow waxa ka dhigaya mid qaas ah iyo sababta aan ugu jecel nahay Hanukeii.
Jalaato berde: Jirrabaad dabiici ah
Xagaaga, kuleylka iyo ... Jalaatada! Markaad go'aansato inaad isticmaasho jalaato ku saleysan waxyaabaha dabiiciga ah, waxaan kuu sheegi karnaa in dareenka dambiga uu baaba'ayo! Markan waxaan kuu keenay cunto macaan oo miro saafi ah: Burooyinka jalaatada. Qabooji xagaagan oo ku raaxee a #xurmada nolosha gacanta ku haya cuntadayada. Maxay ku fiicnaayeen?
Maalintii ay Boqoradda beddeshay Taariikhda: Caawinta Tooska ah 1985
"Allaha badbaadiyo boqoradda"... Dareenka ku noolaanshaha muusiggu wuu is beddelay ka dib markii Boqoraddu qaadatay talaabada dhacdo beddeli doonta bandhigyada nolosha taasi waxay imaan laheyd dhacdada kadib. Sannad kasta waxaa lagu xasuustaa in aysan jirin soo bandhigid intaas ka badan oo ka badan Mercury waxay kicisay, xagaagaas 1985, qalbiyada 1.500 milyan oo daawadayaal ah. Ma jeclaan lahayd inaad dib u soo noolayso?
Lombard Street iyo 10 meelood oo kale waa inaadan seegin haddii aad booqato San Francisco, CA.
Maxaad rabtaa inaad hortaagto San Francisco Bay cunista a Dungenes carsaanyo iyo u diyaar garowga aadista Magaalada China si aad u booqato gees walba oo ah goobtaan loo dalxiis tago. Ama waxaa laga yaabaa inaan tagno goobta Lombard Street? Waxaan rabnaa inaan ku tusno liiska rasmiga ah ee 10 -ka goobood ee mudan in la ogaado haddii aad fasax u aado San Francisco, waxaan sidoo kale kuu sheegnaa mid ka mid ah sirta ugu wanaagsan ee la hayo Hanukeii. Ma rabtaa inaad ogaato?
Doorashada muraayadaha qorraxda ma aha hawl fudud
Maqaalkayaga maanta waxaan kuugu soo qaadannay hagaha dhammaystiran si aad gacanta ugu haysato marka xigta ee aad tagto si aad u dooratid muraayadahaaga xiga Hanukeii. Waxaan ku tuseynaa dhammaan talooyinkaas oo uusan qof kale kuu sheegin. Ma rabtaa inaad wax badan ogaato? Nala akhri!
4 muraayadaha astaanta u ah taariikhda moodada
Dabeecadda qaabka weyn ee muraayadaha, waxaa jira wax weyn sheeko. Xaqiiqdii, qaar ka mid ah moodooyinka ilaa maanta shaqeynaya waxay ku guuleysteen inay adkeystaan ​​waqti ka dib oo ay la qabsadaan isbeddellada maxaa yeelay waxay calaamadeeyeen daqiiqad caan ah oo adduunka madadaalada ah. Waxaan ku tusaynaa waxa ay yihiin qaababkaasi gafas de sol kuwaas oo dhidibada u aasay kahor iyo kadib, waxa ugu fiican ayaa ah inaad ka heli karto gudaha Hanukeii.
Lagoonyada, Suuqyada iyo Xaafadaha; Meelo nagu dhiirrigeliya abuurista
Fikradaha waaweyn gadaashooda waxaa marwalba jira kicin, sabab qaas ah. Anaga ahaan, waxaa jira meelaha sixir in aan dhiirrigelin, taasi waxay noo dhaqaajineysaa inaan abuurno moodelladayada gafas. Maqaalka maanta waxaan kaala hadli doonaa Red Lagoons ee Chile, ilaa geesaha suuqyada ugu soo jiidashada badan California. Miyaad seegaysaa?
"Qi" waa yoga cusub
Qi, Nooc yoga ah oo ilbaxnimooyinka oo dhami ay ku dhaqmeen isla markaana sumcad ku leh shabakadaha. Sababtoo ah waxaan ogaanay sida ay lagama maarmaanka u tahay in la ogaado sida loo tababaro kuweena tamarta, fahamka iyo aqbalida waxa inagu xeeran. Marka laga soo tago helitaanka farsamada sare, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aqriso maqaalkeena maanta, halkaas oo aan ku bari doono wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato qaabkan Nasasho.
Cuba, safar hore: Meelaha ugu fadhiyada badan ee lagu booqdo jasiiradda
Xeeb, neecaw iyo bad! Waxaan ku raaxaysan doonnaa xagaaga Karibiyaanka, halkaas oo ah waqtiga waxaad moodaa inuu barafoobay. Haa! Waxaan ka hadlaynaa Cuba, meeshan sixirka ah, oo taariikh iyo dhaqan ka buuxo. Tilmaamahan waxaan ku faahfaahineynaa meelaha ugu fiican ee ay tahay inaad booqato oo aad ku keydiso GI-yadaada sheekooyin marka aad halkaa joogto. By the way, ha ilaawin muraayadahaaga Hanukeii, Waxaad u baahan doontaa iyaga!.
Ururintayada xagaaga waxay ku dhalatay Kaliforniya
Qoraalkeena maanta waxaan dooneynaa inaan kuugu sheegno wax kasta oo aan dareemeyno aqoonsi iyo dhiirigelin markaan abuureyno ururintayada Hanukeii. Markan waxaan ka hadli doonaa meelahaas, jilayaasha, xusuusta qaabaysay naqshadaha muraayadaha indhaha Pacific, Hyde y Laguna. Ma jeclaan lahayd inaad ogaato waxay yihiin? Sii wad akhriska!
4 Quraacdo caafimaad leh oo ku saleysan cuntada Keto.
Xagaagu waa halkan haddii aad dareento inay soo daahday inaad bilowdo qalliinka bikininka, isdeji! Waxaan kuu soo qaadanay shey aad u caafimaad qaba oo macaan isla waqtigaas. Iyada oo afartan cuntooyinka ah ee aad ku weheliso quraacdaada ku saleysan cuntada Keto, waxaad diyaar u noqon doontaa xeebta toddobaadyo gudahood. Keydso qoraalkan, maxaa yeelay qodobkani waa mid aad u xiiso badan.
Aasiya, Kariibiyaanka, Oceania, iyo Yurub: Hoyga daryeelka saddexda nooc.
Maaddaama nooc kasta uu gaar yahay, sidaas oo kale bay'adda ku hareeraysan. Midda u oggolaanaysa iyaga inay damaanad-qaadaan xaaladaha ugu habboon ee daryeelkooda. Qaad PANDAah xalaasha iyo deerada iyagu waa halyeeyadeenna maanta. Waxaan kuu sheegeynaa wax walba oo ku saabsan degaankooda, iyaga ku saabsan iyo ah! dabcan, sida xayawaankani noogu dhiirrigeliyeen abuuritaanka ururintayada koofiyadaha.
Waxaan jecel nahay San Francisco. & sidaas cal
Had iyo jeer waxaa la yiraahdaa waxaa ka wanaagsan in la soo uruuriyo waaya-aragnimada marka loo eego waxyaabaha, runtiina waxay tahay annaga ahaan, safarradu way naga buuxsameen Raxmadda. Waana taas inaan ku dhex jirno Hanukeii, waxaan ku noolnahay xilligan waxaanna u saarnay hal-abuurnimadeenna duulimaad. Sidaas awgeed munaasabaddan, California iyo geesaha oo dhan ayaa mas'uul ka ah muraayadaha indhaha: Lombard, Soma iyo Southcal. Miyaad seegaysaa?
Ka dhigista wax aan la arki karin: Koalas iyo Zebras
En Hanukeii waxaan ula jaanqaadi karnaa kan dabiiciga ah, wax kasta oo nagu xiraya nuxurkeena: #xurmada nolosha Maya? Taasi waa sababta aan ugu hanweynahay inaan soo bandhignno iskudhafkeena. Hanukeii: u waxyooday nolosha xoolaha. Munaasabaddan halyeeyada waa: Zebra iyo Koala Caps. Koofiyadaha loo sameeyay si aan la arki karin u muuqdaan. Adiguna, adigu miyaad haysataa taada?
Ku noolow nuxurka xagaaga muraayadaha Hanukeii
Markay tahay xagaaga Hanukeii waa safka hore. Maqaalkeenna maanta waxaan ku tusaynaa ugu dambeeyay isbeddellada xagaagan iyo xitaa ka sii wanaagsan, laga soo bilaabo gacanta moodadeena 3 ee muraayadaha indhaha oo aad u sarreeya xilligan: Madow Hyde, Xeebta Gorgor y Madow Baasifigga. Soo ogow sida la isugu geeyo iyo waxa iyaga ka dhigaya kuwo aad u qurux badan.
Sidee tahay habka loo abuurayo muraayadaha indhaha Hanukeii
Ma ogtahay sida ay tahay howsha sameynta muraayadaha indhahaaga Hanukeii? Maqaalkeenna maanta, waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta ku saabsan dhammaan shaqada ka dambeysa moodooyinka muraayadaha indhaha Hanukeii.
Muraayadaha indhaha oo aad ku arki doontid xagaagan meel walba
Miyaad tixgelinaysaa inaad cusboonaysiiso muraayadaha indhaha xagaagan? Hadday jawaabtu haa tahay, waan kugu hambalyeynaynaa, maxaa yeelay waqtiga ka wanaagsan hadda, oo ka wanaagsan qorraxda, xeebta, barkadda iyo qorshayaasha ayaa hadda uun la bilaabay. Ma rabtaa inaad ogaato isbeddellada ugu dambeeya ee muraayadaha indhaha ee xagaaga? Wax walba waan kuu sheegeynaa!
Baararka xeebta ugu fiican ee lagu raaxeysto xagaaga!
Ku soo dhowow xagaaga! Waxaad horeyba u laheyd wax walba oo diyaar u ah fasaxaaga xeebta, maxaa dhacaya haddii? Ma seegi kartid maqaalkeenna maanta. Waan ku barnaa 5 baararka xeebta ugu fiican inaad ka heli karto Spain, halkaas oo qaabka iyo raaxada u taliso, iyo in ka badan oo leh muraayadaha indhaha Hanukeii.
Spaghetti Carbonara: Cunto karis leh taariikh badan
Citita weligeed ah ... Sidaan ugu xiisay safarka iyo inaan ku jahwareerinno meelaha cusub iyo dhaqankooda. Iyo, markaan ka fikirno Talyaaniga, gastronomy-keeda cajiibka ah ayaa maskaxda ku soo dhacaya, Mamma mia! . Munaasabaddan awgeed waxaan go'aansanay inaan kuu soo qaadno baloog loogu talagalay gaar ahaan mid ka mid ah kumanaanka siyaabood ee loo cuno baastada, carbonara ah, Waxaan dhammaantiin kuu sheegi doonnaa taariikhdeeda iyo sida saxda ah ee loo diyaarin karo!
Digaag leh biirka: Ka yaabso martidaada oo soo hel cunto karinta oo leh dhaqan
Dhaqanka beerta Jarmalka ee Oktoberfest Waxay na siisay mid ka mid ah suxuunta ugu fudud uguna dhaqsaha badan ee aan diyaarinno. Waana taas biir ah Waxay u adeegtaa marinade loogu talagalay dhammaan noocyada hilibka, laakiin leh digaag, Si fudud waa cajiib! Taasi waa sababta aan u rabno inaan ku tusno cuntadan cajiibka ah, kan asalka ah oo leh dhammaan tallaabooyinka aad u baahan tahay inaad raacdo si aad u wareerto martidaada.
Soo ogow codsiyada khadka tooska ah ee ugu wanaagsan si aad u soo dejiso fiidiyowyada aad ugu jeceshahay Instagram
Miyay kugu dhacday inaad ku jirto bartaada 'Instagram', waxaad aragtaa waxyaabo aad u qabow oo aad rabto inaad la xiriirto si aad u aragto si ay u dhiirrigeliyaan adiga oo kale Maqaalkeenna maanta, waxaan kuu keenaynaa 5 codsi oo habboon oo aad ku soo degsan karto waxyaabaha ku jira Instagram sida sawirro iyo fiidiyowyo, iyo hey, xitaa kan sheekooyin saamaynta aad ugu jeceshahay.
Sidee laysugu daraa muraayadaha indhahaaga Baasifigga ah Hanukeii Hailey Baldwin
ka gafas de sol noocee ah Cat Eye sida Baasifiga by Hanukeii Marnaba kama bixi doonto qaabka, had iyo jeer waxay siisaa miyir-qab iyo qaab qurux badan kuwa iyaga xiran. Taasi waa sababta, maqaalkeenna maanta waxaan ku tusinaynaa saddex dariiqo oo loo maro isku dar ururintayada Pacific iyadoo la raacayo qaabka moodeliyaha Mareykanka iyo soojeediyaha ugu badan top ka ...
Wali ma garanaysid taariikhda koofiyadaha baaldiga caadiga ah? Waan kuu sheegi doonaa!
Koofiyad u dhalatay si kalluumeysatada iyo beeraleyda looga ilaaliyo cimilada xun ee xitaa ka mid ahayd dharka ciidamada milateriga, ayaa maanta ka mid ah qalabka xiddig ee Wadada dharka iyo dhiirigelinta loogu talagalay naqshadeeyayaasha dusha sare. Haddii aad rabto inaad wax yar ka ogaato mid ka mid ah isbeddellada ugu xiisaha badan ee xagaagan, ha moogaanin boostadan!
Ururinta SOMA: Muraayadaha muraayadaha indhaha oo lagu dhiirrigeliyo qaabka magaalooyinka ee xaafaddan farshaxanka San Francisco
Markaad maqasho erayga SOMA Maxaad ka fikireysaa Haddii waxa ugu horreeya ee maskaxda ku soo dhacay ay ahaayeen ururintayada cajiibka ah gafas de sol waxaa u waxyooday xaafada caanka ah ee San Francisco "Koonfurta Suuqa" Hagaag, waad saxday! Qoraalkeena maanta waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad rabto oo aad ubaahantahay inaad ka ogaatid waxyaabahayaga Aruurinta SOMA adigana, adigu horaba ma haysataa taada?
Ilaali adiga Hanukeii xagaagan: Tilmaamo qaar!
nololeedka Aqoonta iyo Aqoonta
Ku xagaaga oo ay la socoto, buuqa iyo buuqa kumanaan qorshe oo sugaya! Taasi waa sababta aan kuugu diyaarinay liis ay ku jiraan talooyin adiga kugu saabsan si aad u ilaaliso muraayadaha indhaha Hanukeii arrimo dibadeed oo dhaawici kara ama marin habaabin kara. Maadan arag qoraal daneeya adiga Muraayadaha indhaha, ka warran qorshahaaga!
Isbuuc dhammaadka usbuuc??
nololeedka Safarka iyo Goobaha
Waa Jimce dhowaan waxaan idiin soo diyaarinay liis 5-ta hudheel ee ugu caansan Spain. Markaan dhahno 'asalka' waxaan ula jeednaa hudheeladaas oo bixiya adeegyo hoyga xoogaa ka duwan. Laga soo bilaabo hurdadii daawashada xiddigaha, ilaa aan ka soo toosay kaynta dhexdeeda. Ma garaacdaa? Faahfaahin intaa ka badan ka ogow maqaalkeenna maanta!
5 makhaayado casri ah oo ku yaal Madrid halkaas oo aad uga faa'iideysan karto hal-abuurkaaga.
Ma rabtaa qaxwo? Maqaalkeenna maanta waxaannu kuu samaynaynaa soo-jeedin aanad diidi karin. Liis ka kooban 5 dukaan oo kafee ah oo dhiirrigeliya naqshad iyo hal-abuur. U oggolow naftaada inay kugu dhacdo cudurka deegaankeeda oo aad ku raaxeysatid meelahaas gaarka ah ee ay leedahay Madrid. Waad dhiirantahay
5ta xafladood ee muusigga ugu fiican adduunka! Ku dhiirrigel oo u diyaar garow munaasabaddaada xigta
Waa macquul in 2020 ayaa niyad jab nagu reebay markii xafladaha muusigga la joojinayay aafada darteed. Maanta sanad kadib, waxaan rajeyneynaa soo noqoshada inbadan oo iyaga kamid ah. Maqaalkeenna maanta, waxaan ku soo qaadaneynaa 5ta ugu fiican xafladaha muusikada adduunka, kuwa soo noqon doona iyo kuwa looks ka dhiirran badan dhacdooyinkan ayaa na keenay.
Miyaadan wali la kulmin Halston? Haddii aad tahay qof jecel xagjirnimada moodada, waad jeclaan doontaa waxyaabahaan yaryar ee loo yaqaan 'Netflix miniseries'
Hadaad jeceshahay aduunka ee fashion oo waxaad ku raaxeysaneysaa daawashada taxanaha ama filimada aad ka heli karto dhammaan faahfaahinta warshaddan hal-abuurka weyn leh. Maqaalkeenna maanta waxaan ku baraynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato taxanaha cusub Halston iyo noloshiisa aan cabsida lahayn.
Ma ogtahay in muraayadaha indhaha ay leeyihiin qaybo kala duwan.
Taasi waa sax, muraayadaha indhaha ayaa leh qaybo! Qalabkani wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa ilaalinta indhahaaga. Taasi waa sababta aan u abuurnay maqaalkan si aad u ogaato qeybaha ay tahay inaad tixgeliso markaad iibsaneyso muraayadaha indhaha, si ay ula jaan qaadaan daqiiqad kasta oo maalintaada ah.
90-meeyadii way soo noqdeen! 5 dharka ah oo mar labaad isbeddelaya sanadkan 2021
Waxaa laga yaabaa 25, 2021
Fashion waa safar joogto ah iyada oo waqtiga. Miyaanay kugu dhicin inaad hoos u degto Gran Vía ee Madrid oo aad aragto gabar jaakad xidhan daboolay oo ka samaysan maqaar oo aad fadhiisanayso adigoo daawanaya dabeecad ka socota taxanaha telefishanka qaarkood ee 90-meeyadii? Waxaad u maleyn kartaa in wax walba ay soo noqdaan. Laakiin runtu waxay tahay in moodada loo beddelo iyadoo loo eegayo duruufaha dhaqan iyo bulsho. Soo ogow isbeddelada 2021-meeyadii ee dib loo qeexayo sanadka XNUMX!
Ma taqaanaa Alexa Chung? Naqshadeeye iyo qoraa kan na dhiirrigeliya!
Gabadhaan wajigeeda waa hubaal inaad adigu isbaraneyso. Kartidiisu waa mid aan lala simin oo waxay il u ahayd kumannaan qof, innagana, waa jaangooyn qaab. Qoraalkeenna maanta, waxaan ku tusaynaa xogta ugu xiisaha badan ee aad ka ogaan karto Alexa Chung. Kuweena Hanukeii Gabadha isbuuca!
Suuqyada ugu quruxda badan Madrid halkaas oo aad ugu qaadi karto sawirrada ugu fiican bartaada 'Instagram'
Gudaha Hanukeii waxaan haynaa qorshaha usbuucaan! Ma seegi kartid suuqyada mar labaad ka muuqda jidadka Madrid. Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta ku saabsan 4 iyaga ka mid ah. Tiro ka mid ah walxaha gaarka ah iyo waxqabadyada aad ku dhex qaban karto. Shaki la'aan, meelo gaar ah, sidaada oo kale!
Saacado badan oo qorrax ah? Waqti dheeraad ah galabtii!: 5ta saqaf ee ugu fiican Madrid.
Waxaa laga yaabaa 13, 2021
Cirka sida Madrid ... wax yar! Cimiladii fiicnayd ayaa timid kuleylkuna waa halyeeyga maalmaheenna. Marka sida ugufiican ee lagu nasto waa inaad ku raaxeysato qorshe galab wanaagsan magaalada asxaabta. Waxaan ku tusineynaa 5ta saqaf ee ugu fiican Madrid ee aad booqan karto dhamaadka usbuucaan!
Sida laysugu daro muraayaddaada muraayadaha indhaha iyadoo loo eegayo munaasabad kasta oo aan lagu guuldareysan isku dayga. Waxaan ku siinaynaa furayaasha!
Waqtiga sanadka looma baahna inaan joojinno xirashada muraayadaha indhaha! Xilli kasta, naqshado cusub oo xariifnimo leh ayaa umuuqda inay la socdaan maalmaheenna. Waa qalab aan waligiis ka bixi doonin qaabka. Waxaan ku tusinaynaa nashqadaha iyo isbeddellada muraayadaha indhaha oo aad ka heli karto oo keliya Hanukeii.